‘शान्तिनगरलाई नमूना कृषि पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गछौ’ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘शान्तिनगरलाई नमूना कृषि पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गछौ’
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता June 13, 2018	0 168 Views
शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको १० महिना बित्यो  । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पहिलो बजे ट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहे का छन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा आफै ले ल्याएका कार्यक्रम र बजे ट कसरी कार्यान्वयन भइरहे का छन् र जनताले फरकपना के पाए ? यसै सन्दर्भमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डागीसग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्यो भ्याइनभ्याइ हो ला हिजो आज त ?
हो  । खासगरी भौ तिक निर्माणका काममा हामीले सडक निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिएका थियौ ं । ती मध्ये ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएर पनि फछ्यौर् ट भइसके को अवस्था छ । शान्तिनगरकै गौ रवको यो जना भने र एक करो डको सडक कालो पत्रे गनेर् काम मात्रै प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । डिपिआर तयार नहुदा टे ण्डरमा ढिलाइ भयो  । शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढाउन यसै वर्षदे ख मन्टे श्वरी शुरु गरे का छौ ं । स्वास्थ्यतर्फ गाउपालिकाकै दुर्गम मानिने वडा नं. १ र ३ मा सवास्थ्य क्लिनिक स्थापना गरे का छौ ं । ६ र ७ मा वडास् तरीय खो पके न्द्र स्थापना गरे का छौ ं । त्यस् तै खाने पानीतर्फ हाम्रो ध्यान नपुगे कै रहे छ । भर्खरै पानीकै कारण झाडावान्ता महामारीकै रुपमा दे खाप¥यो यसले हामीलाई सवक सिकाएको छ । अहिले सम्मको प्रगतिको हिसावले ८० प्रतिशत विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न भइसके को अवस्था छ । बाकी काम पनि पाइपलाइनमै रहे काले सबै काम सक्ने गरी हामी अघि बढे का छौ ं ।
असार लाग्दै गर्दा बाकी २० प्रतिशत काम सकिन्छन् त ?
कालो पत्रे को काम अहिले टे ण्डर गरे पनि भदौ दे खि नै शुरु हुने हो  । यो बजे ट फिर्ता हुदै न । अकोर् कुरा यसै आवभित्र गरौ ं भन्दा पनि कालो पत्रे का लागि आवश्यक नदीजन्य वस् तु नपाइने समस् याले अड्किएको छ । अब के ही सहज हुदै गएको छ । शिक्षातर्फका के ही काम गर्न खो ज्दा पनि मुद्दा खे प्नुपरिरहे को छ । हामीले शिक्षा क्षे त्रलाई सुधार गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएका थियौ ं तर उच्च अदालतमा हाम्रो कामविरुद्ध मुद्दा परे को ले के ही समस्या परे को छ । विचाराधीन मुद्दाका विषयमा बोल्नु उचित हुदै न । के ही समस्या छन् ।
जनप्रतिनिधि आएको महसुस नागरिकले गरे  त ?
गरेका छन् । पहिलो कुरा हिजो गाडी नचल्ने ठाउ“मा यातायातका साधन पुगे का छन् । हिजो छितरिएर काम हुन्थे । को ही पूरा हुने अवस् था थिएन । आज हामीले त्यो छितरिएको बजे टलाई एउटै डालो मा राखे र काम गरे का छौ ं । शिक्षा, स् वास् थ्य, भौ तिक निर्माणका कामहरु उल्ले ख्य भएका छन् । अकोर् कुरा धार्मिक सांस् कृतिक पक्षलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखे का छौ ं । खासगरी शान्तिनगरमा मगर सांस्कृतिक संग्रहालय, थारु सांस्कृतिक संग्रहालय र मुश्लिम सांस्कृतिक संग्राहलय बनाउने भने र बजे ट विनियो जन गरे र सबै धर्म, जातिहरुको संरक्षण गनेर् प्रयास गरे का छौ ं । त्यसै गरी महिलाहरुलाई स् वरो जगार बनाउन विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रम गरिसके का छौ ं । त्यस्तै कृषि क्षे त्रमा पनि हिजो पके ट क्षे त्रको रुपमा रहे को ठाउलाई जो नसम्म पु¥याएका छौ ं । शान्तिनगर गाउपालिकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियो जना पनि लागु भएकाले नमूना कृषि पके ट क्षे त्रका रुपमा शान्तिनगरलाई विकास गनेर् यो जना बनाएर अघि बढे का छौ ं ।
लक्षित वर्गका लागि आइरहे को ३५ प्रतिशत बजे ट जनप्रतिनिधिहरुले काटिदिए भन्ने गुनासो छ नि ?
त्यसो हो इन । जनप्रतिनिधि नहुदा विनियो जन भएको त्यो बजे ट सदुपयो ग भएको हामीले दे खे नौ ं । हामीले पनि अनुभव गरे का छौ ं । कि त्यो बजे ट कतै फलदायी भएको पाइएन ।
त्यही भएर हामीले महिलाका लागि सीपमूलक कार्यक्रम, युवाहरुका लागि खे लकूदलगायतका कार्यक्रम र अपांगताका लागि पनि कार्यक्रम दिएर अघि बढाउने पक्षमा छांै  । जनप्रतिनिधि आइपुगे पनि कर्मचारीको अभाव झे ल्नुप¥यो  । बल्ल अहिले सहज भएको छ । आउदो वर्षदे खि हामीले पक्कै यसलाई थप प्रभावकारी बनाएर लै जाने छौ ं ।
शान्तिनगरमा खाने पानीको असुरक्षा बढी दे खियो है  ?
हिजो सम्म जसले जहा“ भे ट्यो त्यहींको पानी खाइरहे को अवस् था थियो  । जनप्रतिनिधि पनि जनताले खानेपानीको गुणस् तरबारे अनभिज्ञ नै थियौ ं । झाडापखाला फै लिएपछि मात्रै हामीले मुहानको अवस् थाका विषयमा जानकारी लियौ ं । त्यसपछि हामी झस् िकयौ ं कि शान्तिनगरमा खाने पानीको अवस् था नाजुक रहे छ भन्ने कुरा । धे रै साथीहरुले मलाई भन्नुभयो यति ठूलो महामारीलाई पनि जित्नुभयो  । नागरिकलाई क्षतिबाट जो गाउनुभयो , तर मलाई अहिले को अवस्थामा पनि शान्तिनगरमा खाने पानीलाई सुरक्षित गर्न सके का रहे नछौ ं । हामीले खानेपानीमा मानव दिसा मिसिएको भे टिन्छन् । यसले हामीलाई २०७१ सालमा खुला दिसामुक्त क्षे त्र घो षणा गरे पनि बानी बदलिएको रहे नछ भन्ने कुराले मलाई लाज लागे र आउ“छ । त्यसै ले अहिले सबै पानीका मुहानको सुरक्षाका लागि आवश्यक बजे टको व्यवस् था गरे र स् वच्छ खाने पानीका लागि काम गनेर् यो जना बनाउन थाले का छौ ं ।
खाने पानीको सुरक्षाका लागि बजे ट ल्याउनुहुन्छ उसो भए ?
खाने पानी अति संवे दनशील कुरा हो  । खाने पानी अशुद्ध हुदा १६ सय बढी बिरामी परे को हामीले बिर्सिएका छै नौ ं । त्यसका लागि उच्च सतर्कता अपनाएका छौ ं ।
शान्तिनगरमा सहज सञ्चार कहिले हुन्छ ?
कार्यालयमा त्यस् तो समस्या छै न । तर गाउपालिकाका अन्य ठाउमा पनि सहज सञ्चारका लागि हामी निर्वाचित भएर आएपछि ल्याण्डलाइन फो नका लागि निवे दनसमे त सम्बन्धित कार्यालयमा पु¥याएका छौ ं । खासगरी मै ले मन्त्रालयसम्म पुगे र लविङ पनि गरे ं । ५० बढी लाइन वितरणका लागि निवे दन पनि दिइयो तर अहिले सम्म त्यो सुनुवाइ भएन । नाफाखो री संस् था हो , हाम्रा लागि कति काम गर्ला ? त्यस् तै मो बाइल ने टवर्कको सुधारका लागि पनि मै ले सम्बन्धित निकायस“ग निरन्तर पहल गरिरहे को छु । छिट्टै सम्बो धन गनेर् आश्वासन पाएको छु ।
विद्युतको पनि अनियमितता खे प्नु प¥या छ भन्ने गुनासो छ नागरिकको  ?
विद्युतको लागि अगै यादे खि दाङसम्म तानिएको १३२ के भी लाइन च्याण्टिखो लामा स्टो र गरे र सप्लाई गनेर् हो  । यसमा बदमासी के भयो भने ठे के दारले सभेर् गर्दाखे री नै आफूलाई सहज हुने ठाउ तिर मात्रै लाइन तान्ने पूर्वाधारको विकास गरिएको रहे छ । त्यति ठूलो भो ल्टे जको तार कसै को घरमाथिबाट परे को ÷अवस्था छ । त्यसै ले विवाद पनि आएकाले समस् या भएको छ । यो समस्या समाधान गर्न हामी लागे का छौ ं । त्यसपछि विद्युतको समस् या पनि समाधान भएर जाने छ ।
शान्तिनगरको विकासका लागि कस् ता यो जना प्राथमिकतामा छन् ?
हामीले हिजो दे खि यो जना छनो ट शुरु गरिसके का छौ ं । हिजै स्रो त अनुमानको बै ठक पनि बसे का छौ ं । खासगरी यसपालि टुक्रे यो जनालाई निरुत्साहित गनेर् हाम्रो यो े जना छ । २५ हजार ५० हजारका यो जनाले विकास पनि नहुने र जनशक्तिको पनि अभाव हुने भएकाले यस् ता यो जना नल्याउन आग्रह गरिसके का छौ ं । चालु आर्थिक वर्षमा साढे चार सय यो जना थिए । संख्या मात्रै धे रै भएर काममा अप्ठे रो पदोर् रहे छ ।
टुक्रे यो जनाले विकास हुदै न भन्ने हो  ?
समस् या छ नि । जनशक्ति कम भएको अवस् थामा त्यति धे रै यो जना सम्पन्न गर्न त गाह्रै हुन्छ नि । बरु वडाकै गौ रवका यो जना छनो ट गरौ ं चाहे त्यो सिंचाई हो स्, खाने पानी हो स् वा सडक हो स् चाहे शिक्षा, स् वास् थ्य र पर्यटनका विभिन्न यो जनाहरु हुन् यस् ता यो जना ल्याउनुपर्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के हुनसक्छ प्राथमिकता ?
स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई र कृषि नै हुन् प्राथमिकताका विषय ।
गाउपालिकाको विकासका लागि कस् ता यो जना ल्याउदै हुनुहुन्छ ?
शान्तिनगर गाउपालिका विविधताको क्षे त्र छ । महाभारत र चुरे , बबई आदि सबै क्षे त्र मिसिएको क्षे त्र हो  । यस क्षे त्रको विकासका लागि तीन भागमा बा“डे र काम गनेर् यो जना छ ।
पहाडी, मध्यभाग र बबई क्षे त्र भने र वर्गीकरण गरे का छौ ं ।
यी तीनवटै क्षे त्र सुहाउदा कार्यक्रमहरु बनाएर अघि बढे का छौ ं । जस् तो पहाडमा बाख्रापालनको विकास गनेर् , बीच भागमा तो री
र मकै को पके ट क्षे त्र र तल्लो भे गमा गहु उत्पादन क्षे त्र भने र छुट्याएका छौ  । त्यसका लागि तीनवटा बो रिङ पनि खनिसके का छौ ं । यति गर्दा गदैर् पनि यस् तो कामले तुरुन्त प्रतिफल दे खिदो रहे नछ मलाई लाग्छ । एक÷दुई वर्षभित्र प्रतिफल आउला ।
गाउपालिकालाई चिनाउने कसले हो , उत्पादनले कि, पर्यटनले  ?
हाम्रो लक्ष शान्तिनगर गाउ“पालिकालाई कृषि पर्यटकीय क्षे त्रको रुपमा विकास गनेर् यो जना बनाएका छौ ं । जसअनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम पनि यहा“ चलिरहे को
छ । यसै मा टे के र हामीले कृषि उत्पादनमा नमूना काम गनेर् छौ ं । त्यस् तै प्रत्ये क वडामा बो यर जातका बो का ल्याएर वितरण गनेर् तयारीमा हामी लागे का छौ ं । त्यसै ले गर्दा कृषि उत्पादनकै लागि यो क्षे त्र उपयुक्त छ र सो ही अनुसार हामी कार्यक्रम ल्याएर काम गनेर् छौ ं । त्यसपछि अरु शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षे त्र त नभई नहुने नै छन् । ती क्षे त्रमा पनि हामीले काम गनेर् छौ ं ।
Previous: प्रधानन्यायाधीशमा जोशी सिफारिस
Next: नेपालगञ्ज–दिल्ली उडानको पहल गरिदिन आग्रह